Zvinosuruvarisa kuti ecommerce mapuratifomu haaite kuti kushambadzira kuve pekutanga. Kana iwe uine chitoro chepamhepo, hausi kuzosangana nemari yako izere yemari kunze kwekunge iwe uchikwanisa kuwana vatengi vatsva uye nekuwedzera mukana wemari wevatengi varipo.
Nekutenda, pane rudzi rukuru rwekushambadzira otomatiki mapuratifomu kunze uko anopa zvese zvishandiso zvinodiwa kuti zvinongedze otomatiki vatengi kwavanonyanya kuvhura, kubaya, uye kutenga. Imwe yemapuratifomu akadaro Ngoro Guru. Ngoro Guru inopa zvese zvinoitwa kuti zviwedzere mari kubva kune wese mutengi waunotora nematanho akasarudzika, akasarudzika ekutengesa.